AIA, AFG Team Up to Sponsor Myanmar National League | Myanmar Business Today
Home Business Local AIA, AFG Team Up to Sponsor Myanmar National League
AIA, AFG Team Up to Sponsor Myanmar National League
Insurance giant AIA, recently licensed to operate in Myanmar, has teamed up with AYA Financial Group (AFG) to sponsor the Myanmar National League. The two companies on December 17 signedamulti-year sponsorship deal starting with the 2020 season.
The deal offers AIA and AFG co-branding opportunities across the professional leagues organized by the MNL, including the popular top-tier Myanmar National League-1 and Myanmar National League-2 as well as the MFF Charity Cup, General Aung San Shield and Myanmar National Youth League.
“Asalife insurance brand focused on health and wellness, we are extremely passionate about sports and the power it has to inspire people towards leading active lifestyles,” said Nhon (Luc) Ly, AIA Myanmar’s CEO. “This co-sponsorship of the Myanmar National League with AFG reflects our mutual goal to develop sports in Myanmar.”
The arrangement will see the AIA and AYA logos being displayed on the jerseys of all players for all matches organized by the MNL.
“This sponsorship with AIA Myanmar further demonstrates our commitment to the sport, and we believe this momentous partnership will goalong way in further supporting the Myanmar National League to help them meet their goals,” said U Myint Zaw, managing director of AYA Bank, an AFG company. “We are extremely excited with the benefits we believe this would deliver for ‘the beautiful game’ in Myanmar,”
AIA has been actively supporting soccer development through its partnership with Tottenham Hotspur, one of the top clubs in the English Premier League, for which AIA is the Global Principal Sponsor.
In Myanmar, AIA organized its AIA KICK event in Yangon earlier last year, bringing two Tottenham Hotspur development coaches to train hundreds of budding youth players. The MNL sponsorship further emphasizes the company’s support of soccer development in the country from the grassroots levels.
AIA နှင့် AFG တို့ နေရှင်နယ်လိဒ်ထောက်ပံ့ရန် စပွန်ဆာစာချုပ်ချုပ်ဆို
မကြာမီသေးမီက နိုင်ငံခြားအသက်အာမခံလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိထားသည့် AIA နှင့် ပြည်တွင်းဘဏ်များအနက်မှ တစ်ခုဖြစ်သော AYA Financial Group ( AFG ) တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘောလုံးအားကစားကို အခြေခံမှ စတင်၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် Myanmar National League (MNL) နှင့် အတူ Sponsorship စာချုပ်ကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ရက်နေ့တွင် ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။
၎င်းတို့၏အထောက်အပံ့ပေမည့်အစီအစဉ်ကို Myanmar National League ၏ ၂၀၂၀ ဘောလုံးရာသီမှ စတင်မည်ဖြစ်ပြီး Myanmar National League မှ စီစဉ်သော နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လိဂ်များဖြစ်သည့်MNL-1 နှင့် MNL-2 ၊ MFF Charity Cup ၊ General Aung San Shield နှင့် Myanmar National Youth League တို့မှတစ်ဆင့် အမှတ်တံဆိပ်ပုံရိပ် မြှင့်တင်နိုင်မည့် အခွင့်အရေးများကို ဖော်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
” AFG နဲ့အတူ Myanmar National League ကို ပူးတွဲကူညီပံ့ပိုးမှုပေးခြင်းဟာ မြန်မာ့အားကစားကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကိုလည်း ထင်ဟပ်စေပြီး မြန်မာပြည်သူလူထုကို ပိုမိုကျန်းမာအသက်ရှည်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဘဝများ ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေရန် ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကတိကဝတ်ကို ပြည်သူတွေထံ ဆောင်ယူနိုင်ဖို့အတွက် တမူထူးခြားတဲ့ အခွင့်အရေး တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်” ဟု AIA Myanmar ၏ CEO ဖြစ်သူ Mr. Nhon Ly (Luc) က ပြောသည်။
Sponsorship အရ MNL မှ ဦးစီးသော ပြိုင်ပွဲများအားလုံးအတွက် ကစားသမားအားလုံး၏ ဂျာစီအင်္ကျီများတွင်လည်း AIA နှင့် AYA Bank တို့၏ အမှတ်တံဆိပ်များကို တွေ့မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
“AIA Myanmar နဲ့ပူးတွဲ ကူညီပံ့ပိုးမှုပေးခြင်းမှတဆင့် အားကစားကို မြှင့်တင်ချင်တဲ့ စိတ်ကို ထပ်မံပြသသွားတာဖြစ်ပြီး ဒီထူးခြားတဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာ Myanmar National League ရဲ့ အောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်များကို ရောက်အောင် ရေရှည် ပူးပေါင်းကူညီသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရရှိမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေကနေ လှပတဲ့ကစားပွဲတွေမြင်ရတော့မှာဖြစ်လို့အရမ်းပဲ စိတ်လှုပ်ရှားနေမိပါတယ်။” ဟု AFG လက်အောက်ရှိAYA Bank ၏ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ဦးမြင့်ဇော်က ပြောသည်။
AIA သည်ဘောလုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် English Premier League ထိပ်တန်းကလပ် အသင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် Tottenham Hotspur FC ကိုလည်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အဓိကပံ့ပိုးသူအဖြစ် ရပ်တည် လျက်ရှိသည်။
ထို့ပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း AIA သည် AIA KICK 2019 ပွဲကြီးကို ယခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ရန်ကုန်မြို့၌ စီစဉ်ကျင်းပခဲ့ပြီး ထိုပွဲကြီးတွင် Tottenham Hotspur FC မှ ဖွံ့ဖြိုးရေးနည်းပြ နှစ်ဦးသည် ရာနှင့်ချီသော လူငယ်ဘောလုံးသမားများကို အခမဲ့လေ့ကျင့်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Previous articleUpper House Approves Proposal to Regulate Tissue-Culture Banana Industry
Next articleMinistry Relaxes SME Lending Rules